Sweden oo wax ka qabanaysa tacadiga haysta dhallaanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Milen Eyob iyo Abdullahi Mohammed oo ka qeeybqaatey baaristii dhallaanka kelinimada ku yimaada ee la wayo. sawir: Sawirle: Emil Langvad/TT
Sweden oo wax ka qabanaysa tacadiga haysta dhallaanka
Dhallaanka ku tabaaleey-san Sweden
La daabacay onsdag 21 december 2016 kl 10.31
Cabdullaahi Maxamuud oo ku magac-dheer Cabdi Cadow, wuxuu ka howl-galaa goobaha lagu xannaaneeyo dhallaanka keli-nimada dalkan ku yimaada, sidoo kale wuxuu Cabdi Cadow ka mid yahay guddi talo bixin ka siiya hoggaanka wakaaladda socdaalka ee arrimmaha dhallin-yarada da’da yar.
Hayadda caalamiga ee qarammada midoobey waayadan dambe dhaleeceeyn ugu soo jeedisay maamulka dalka Sweden iyo in aaney sidii loo baahnaa uga soo bixin xuquuqda dhallaanka dalka ku dhaqan iyo xaqa ey u leeyihiin dhowrista xuquuqdooda bani’aadmi-nimo, sida uu sheegay Cabdullaahi Maxamuud mar uu xarunta idaacadda nagu soo booqday.
Maamulka dalka ayaa eedeeymahaa dabood ku tallaabsaday sidii uu wax uga qaban lahaa dhaleecooyinka loo soo jeediyey:
Maadaama aaney dhallaankani kalsooni buuxda ku qabin hayadaha iyo wakaaladaha dawladda ayaa mashruuc loo siiyey ururro madax bannaan oo uu ka mid yahay ururka Badbaadada Dhallaanka afkan iswiidhishkana lagu yiraahdo ”Rädda Barnen” iyo ururka Stadsmissionen. Xaggeey haddaba ka soo jeedaan dhallankan aan wax wara laga heyn noloshooda ee qaar dhuumaaleeysiga waddanka ku joogaan, qaar isaga socdaaleen, qaarkoodna aan war iyo wacaal laga heyn halka ey ku sugan yihiin.